2 Samueri 18 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 18:1-33
18 Zvino Dhavhidhi akaverenga vanhu vaakanga ainavo, akagadza vakuru vezviuru nevakuru vemazana kuti vavatarisire.+ 2 Dhavhidhi akatumirawo chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu+ zvevanhu chichitarisirwa naJoabhi+ uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu chichitarisirwa naAbhishai+ mwanakomana waZeruya, mwana wababa vaJoabhi,+ uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu chichitarisirwa naItai+ muGati. Mambo akabva ati kuvanhu: “Chokwadi ini ndichaendawo nemi.” 3 Asi vanhu vakati: “Imi hamufaniri kuenda,+ nokuti kana tikangotiza, havangaisi mwoyo patiri;+ uye kana hafu yedu ikafa, havangaisi mwoyo patiri, nokuti imi makaenzana nevanhu vedu vanokwana zviuru gumi;+ zvino zvingava nani kana mukashanda muchitibatsira+ muri muguta.” 4 Naizvozvo mambo akati kwavari: “Ndichaita chero zvakakunakirai.”+ Mambo akaramba akamira parutivi pegedhi,+ vanhu vose vakabuda vari mapoka emazana neezviuru.+ 5 Mambo akarayira Joabhi naAbhishai naItai, achiti: “Muitire tsiye nyoro+ jaya, iye Absaromu, nokuda kwangu.” Vanhu vose vakazvinzwa mambo paairayira vakuru vose nezvenyaya yaAbsaromu. 6 Zvino vanhu vakaramba vachienda kusango kunosangana nevaIsraeri; hondo yacho ikarwirwa musango raEfremu.+ 7 Vanhu vaIsraeri+ vakazokundwa+ nevashandi vaDhavhidhi, uye kwakaurayiwa vanhu vazhinji pazuva iroro, varume zviuru makumi maviri. 8 Kurwa kwakapararira ikoko panyika yose yakanga ichioneka. Sango rakaparadzawo vanhu vazhinji kupfuura vakaparadzwa nebakatwa pazuva iroro. 9 Absaromu akazongoerekana asangana nevashandi vaDhavhidhi. Absaromu akanga akatasva nyurusi, uye nyurusi racho rakapinda nepasi pematavi omuti mukuru akanga akarukana, zvokuti musoro wake wakahakira mumuti wacho mukuru, akarembera pakati pematenga nenyika,+ nyurusi raaiva akatasva zvarakapfuurira. 10 Mumwe murume akazviona, akaudza Joabhi+ kuti: “Tarirai! Ndaona Absaromu akarembera mumuti mukuru.” 11 Joabhi akati kumurume akanga achimuudza: “Zvino zvawazviona, nei usina kubva wamuuraya? Ndingadai ndakupa masirivha gumi nebhandi.”+ 12 Asi murume wacho akati kuna Joabhi: “Kunyange kana ndikayererwa masirivha chiuru muzvanza zvangu, handingatambanudziri mwanakomana wamambo ruoko rwangu; nokuti mambo akurayirai imi naAbhishai naItai isu tichizvinzwa, achiti, ‘Chenjererai, chero ani zvake, pamusoro pejaya racho, iye Absaromu.’+ 13 Nezvisizvo ndingadai ndaitira mweya wake zvakaipa uye nyaya yacho yose yaisazovanzirwa mambo,+ uye imi maizobva munyaya yacho.” 14 Joabhi akati: “Rega ndisanonoka kudai ndiri pamberi pako!” Naizvozvo akatora miseve mitatu, akaiisa muchanza chake, akabaya+ nayo mwoyo waAbsaromu paakanga achiri mupenyu ari pakati+ pomuti wacho mukuru. 15 Vashandi gumi vakanga vakatakura zvombo zvaJoabhi vakabva vakomba, vakabaya Absaromu, kuti vamuuraye.+ 16 Zvino Joabhi akaridza hwamanda,+ kuti vanhu vadzoke, varege kudzingirira vaIsraeri; nokuti Joabhi akanga adzivisa vanhu. 17 Vakazotora Absaromu, vakamukanda musango mugomba guru, vakaisa murwi mukuru kwazvo wematombo pamusoro pake.+ Asi vaIsraeri vose, murume mumwe nomumwe akatizira kumba kwake. 18 Zvino Absaromu, paaiva achiri mupenyu, akanga atora shongwe, akazvimisira shongwe+ yacho, iri muBani raMambo,+ nokuti akati: “Handina mwanakomana achazoita kuti zita rangu rirambe richiyeukwa.”+ Naizvozvo akatumidza shongwe yacho zita rake,+ uye ichiri kunzi Shongwe yaAbsaromu kusvikira nhasi. 19 Zvino Ahimaazi+ mwanakomana waZadhoki akati: “Ndapota, regai ndimhanye, ndinoudza mambo mashoko acho, nokuti Jehovha amutongera kuti amusunungure paruoko rwevanomuvenga.”+ 20 Asi Joabhi akati kwaari: “Hausi munhu wokuti azivise mashoko nhasi, uchazozivisa mashoko rimwe zuva; asi nhasi haufaniri kuzivisa mashoko, nokuti mwanakomana wamambo afa.”+ 21 Joabhi akabva ati kumuKushi:+ “Enda unoudza mambo zvawaona.” MuKushi wacho akakotamira Joabhi, akatanga kumhanya. 22 Zvino Ahimaazi mwanakomana waZadhoki akatizve kuna Joabhi: “Zvino, kunyange zvakadaro ndapota, ndiregereiwo ndimhanye, nditevere muKushi.” Zvisinei, Joabhi akati: “Unoda kumhanyireiko mwanakomana wangu, ipo pasina mashoko aripo nokuda kwako?” 23 Asi iye akati: “Zvino, kunyange zvakadaro, regai ndimhanye.” Naizvozvo akamuti: “Chimhanya hako!” Ahimaazi akatanga kumhanya nenzira inoenda nokuRuwa,+ akapedzisira apfuura muKushi wacho. 24 Zvino Dhavhidhi akanga akagara pakati pemagedhi maviri.+ Munguva iyi, murindi+ akaenda padenga regedhi pedyo parusvingo. Akazotarira akaona munhu aimhanya ari oga. 25 Naizvozvo murindi akashevedzera, akaudza mambo, mambo achibva ati: “Kana ari oga, ane shoko mumuromo make.” Iye akaramba achiuya, achiswedera pedyo zvishoma nezvishoma. 26 Zvino murindi wacho akaona mumwe murume achimhanya. Naizvozvo murindi akashevedzera kumuchengeti wegedhi akati: “Tarira! Kune mumwezve murume ari kumhanya ari oga!” mambo achibva ati: “Naiyewo ari kuuya nemashoko.” 27 Murindi akati: “Ndiri kuona kuti mamhanyiro+ ewokutanga akafanana nemamhanyiro aAhimaazi+ mwanakomana waZadhoki,” mambo achibva ati: “Uyu murume akanaka,+ ari kuuya nemashoko akanaka.”+ 28 Ahimaazi akazoshevedzera akati kuna mambo: “Rugare!” Naizvozvo akakotamira mambo chiso chake chakatarira pasi. Akati: “Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe,+ aisa+ kwamuri varume vanga vamukira ishe wangu mambo!” 29 Zvisinei, mambo akati: “Ko jaya racho, iye Absaromu, rinofara here?” Ahimaazi akati: “Ndaona nyonganyonga huru panguva iyo Joabhi atuma mushandi wamambo nomushandi wenyu, asi handina kuziva kuti changa chiri chii.”+ 30 Naizvozvo mambo akati: “Mira hako parutivi, mira pano apa.” Ipapo akamira parutivi, akaramba akamira. 31 Zvino muKushi+ akasvika, muKushi wacho akati: “Ishe wangu mambo ngaagamuchire mashoko, nokuti Jehovha akutongerai nhasi kuti akusunungurei mumaoko evaya vose vanokumukirai.”+ 32 Asi mambo akati kumuKushi wacho: “Jaya racho, iye Absaromu, rinofara here?” MuKushi akati: “Vavengi vashe wangu mambo navose vaya vakakumukirai kuti vaite zvakaipa ngavave sejaya racho.”+ 33 Mambo akabva anetseka, akakwira kuimba yepadenga+ yaiva pamusoro pegedhi, akasvimha misodzi; uye akafamba achiti: “Mwanakomana wangu Absaromu, mwanakomana wangu kani, mwanakomana wangu+ Absaromu! Haiwa, kudai ini ndanga ndafa, panzvimbo pako iwe, Absaromu mwanakomana wangu, mwanakomana wangu kani!”+
2 Samueri 18